Yaroslavl zoo itholakala ngasemzini Yaroslavl edolobhaneni Shevelyuha. Lomlomo waso olusemthethweni senzeka ngo-2008 futhi kuphelelwe ukugubha enkulungwaneni komuzi. I zoo ihlanganisa indawo amahektheli phezu 100, okuyinto mayelana 250 zezilwane ekhaya.
adventure ezithakazelisayo futhi kumnandi ngeke akhubeke Yaroslavskyy zoo, ukusebenza zazo - kusuka amahora 10 kuya 18 ngesonto. Ibhokisi ihhovisi ziyeke ukusebenza e amahora 17. Ukugibela amahhashi is sima 16,30.
Ukuze uthole esichiwini kungaba ngemoto noma izithuthi zomphakathi. Lapho uhlela uhambo lwakho kangcono ukukhetha amabhasi №21 futhi №25 noma ikhumbi №93. Kuwufanele yisho izindleko okufakwayo Yaroslavl zoo. Intengo ithikithi izivakashi omdala - ruble 250, izingane kusukela 7 kuya kwengu-14 - ruble 150, ngaphansi kweminyaka engu-7 - mahhala. Ticket futhi enikeziwe ukufinyelela ekzoterrarium. Ngaphezu kwalokho, ungavakashela kwepaki izilwane eziyivulayo ayabulala, ukugibela amahhashi noma ukugibela "Ukudoba".
Yaroslavl zoo uhlukile isakhiwo. Zonke izilwane bahlala ezinkanjini, lapho izimo zokuphila eduze zemvelo. Lokhu kwenziwa ngoba induduzo izakhamuzi, okuyinto ezimweni ezikahle ziqala ukuzalela ngokwemvelo. Injongo ngale ndlela ezithakazelisayo - inzuzo hhayi esiphezulu, kodwa ukudalwa kanye nokuthuthukiswa yalelozwe ethile. wokusungula nefilosofi kuyinto ukugxila kulondolozwe izilwane zasendle futhi usizo sokusinda zezinyoni ezingavamile.
Okwamanje, zoo iyikhaya lezinhlobo ezingu-1600 zezilwane ezahlukene. Phakathi kwabo ungabona ama-kangaroo amabhere, llama kanye namadube, namanxala, izimpungushe nezimpisi, storks futhi pheasants, izinyamazane kanye nentshe. Omunye abakhileyo engavamile kakhulu futhi ezingavamile e-zoo kungakhulisa ngokuthi ezimbili esinamakhanda inyoka wasebukhosini.
Yaroslavl zoo idume omunye umsebenzi ezithakazelisayo futhi engavamile. insimu yalo ungukukhombisa isikhungo esiyingqayizivele "UMphongolo". Lesi sakhiwo ezintathu storey uhlukaniswe imikhakha eziningana, ngayinye okuyizinto izilwane zinhlobo ezahlukene. Lapho ungakwazi ukugcina impilo nemikhuba izinhlanzi nezilwane ezihuquzelayo, izitshalo nezinambuzane.
pin Special ivumela wemboni uthinte ezinye izilwane bese udlale nabo. izingulube Empeleni, lapho ivezwa, izimbuzi, izinkukhu kanye nezinye nezilwane non-okuzingela, zokuxhumana nabo ngeke bakwati kulimata izivakashi.
Yaroslavl zoo liyaziwa ezinkulumo zakhe futhi imihlangano nabaholi zezemfundo, ososayensi nezesayenzi. Injongo izinhlangano nokumela is wokugxilisa umhlaba omusha izivakashi kanye nezingane zabo. Phela, abantu abaningi uyofunda ukuwuthanda nokuhlonipha imvelo, ngcono kuyoba ukuphila kwaso sonke isintu.
Ezu wena futhi iqhaza izinkambo ehlukahlukene thematic, ukugibela izilwane futhi ukuthatha izithombe nabo. Izinhlelo eziyisipesheli iqembu abafundi okuhloswe ngazo ukuthuthukisa isiyonke izingane wokugxilisa kuzo uthando imvelo. Ukuze abantu abakhubazekile baye basungula izinhlelo ezikhethekile ukusiza ukuthuthukisa isimo esingokomzwelo abahlanganyeli.
Amaphilisi Abonayo "Artra Chondroitin": yokusetshenziswa, analogs